Ingabe ziqale phansi izigameko zokubulalana e-033 Lifestyle? | News24
Ingabe ziqale phansi izigameko zokubulalana e-033 Lifestyle?
Indawo yobumnandi i-033 Lifestyle.PHOTO:nokuthula khanyile
KUBUKEKA ziqhubeka zanda izigameko zokudutshulwa kwabantu endaweni yobumnandi i-033 Lifestyle eselokishini laseMbali kulandela ukudutshulwa kwamadoda amabili abehambele lendawo ngeSonto ekuseni.
UThembelani Mbhele udutshulwe washonela endaweni yesigameko kwase kuthi umngani wakhe uXolani Cele yena wasinda ngokulambisa.
Lendawo ehanjelwa kakhulu abantu abasha ike yaba nezigameko zokuchitheka kwegazi phambilini njengoba esigamekweni esashaqisa abaningi ngonyaka ka 2012 kwadutshulwa kwabulawa uBuhle Nqunqa esidlangalaleni kubuka wonke umuntu.
Ngokuthola kwe-Maritzburg Echo, uCele noMbhele bebehambele lendawo ngesikhathi kuqubuka ingxabano nomunye wesilisa ogcine ngokuthi abaleke angene emotweni yomngani wakhe ebipake ngaphandle kwase-033.
Okhulumela amaphoyisa ase-Plessislaer nokuyiwona aphenya icala lokubulala kanye nelokuzama ukubulala uKapteni uMusa Ntombela uthe uMbhele no Cele balandele lona akade bexabana naye endaweni engaphandle yokupaka izimoto.
“Kusolakala ukuthi bamlandelile babe sebeyalela umshayeli wemoto nongumsolwa kulelicala ukuthi amkhiphele ngaphandle kepha wenqaba. Kubikwa ukuthi bavele baphihliza iwindi lemoto ngetshe umshayeli wabahamba nokuyilapho ebuye khona esehlomile wavulela ngenhlamvu kwashona oyedwa.”
UNtombela uthe kumanje bekungakaboshwa muntu mayelana nalesigameko. Ozibize ngemenenja esebenza ebusuku kuyona lendawo yokuzithokozisa ephawula mayelana naloludaba uphikile ukuthi lesigameko besihlanganisa amakhasimende abo.
“Kusiphatha kabi ukuzwa sekuthiwa lesigameko senzeke emagcekeni ase-033 ngoba lokho akulona iqiniso, akekho umuntu olimale lapha ngeSonto ngisho nangaphandle kwesango onogada bethu abazange bezwe lutho.”
Lemenenja ithi nabo bezwe ngalesigameko befika bezovula ngoMsombuluko ekuseni.
“Lesigameko senzeke emuva kwehora lesibili thina sesivalile. Ukube senzeke sisekhona ngabe onogada bethu ababa semgwaqeni kukhona abakubona futhi namaphoyisa awakaze afike ezosihloma imibuzo ngoba ayazi ukuthi asihlangene nokwenzeka thina,” kusho yena.
Omunye umthombo we-Maritzburg Echo othi wawukhona kulendawo kwenzeka lesigameko uthe kwakusavuliwe e-033 ngesikhathi lamadoda edutshulwa. “
Kwase kuphithizela amaphoyisa kungasahambeki, kuyiphutha ukuthi bathi babe sebevalelile ngoba kwakusavuliwe e-033 ngesikhathi mina laba bedutshulwa futhi babekade behleli khona.”
UCele okubikwa ukuthi usesimweni esibucayi kwesinye sezibhedlela kuthiwa waphuthunyiswa eMbalenhle Clinic emuva kokudubuleka. Kanti omunye wonogada base Mbalenhle okhulume naleliphephandaba uthe onogada ababesebenza ngeSonto ebusuku bathwala kanzima njengoba abangani baCele bangena ngodli babakhomba ngezibhamu befuna ukumbona ngenkani. “Kwaze kwaphoqeleka ukuthi kubizwe amaphoyisa cishe kathathu ngoba babefuna ukumela odokotela ngenkani ngesikhathi bezama ukusindisa impilo yomngani wabo.”
Imizamo yokuthola umndeni kaMbhele oshone kulesigameko ayiphumelelanga kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela.